Maxay Google Analytics U Qaadanayaan Sicirada? - Soonfalka ayaa bixiya jawaabta
Milkiilayaasha shabakadda waxay u baahan yihiin inay ogaadaan inta qof ee booqda goobaha maalinlaha ah si ay u qiimeeyaan waxqabadkooda. Mid ka mid ah jaangooyooyinka loo isticmaalo si loo qiyaaso boqolladan ayaa ah heerka sare u kacda ee diiwaan gelinaya tirada dadka ku dul taal bogga oo waxba ku qaban.
Waxqabadka noocan ah ee soo booqda ma soo kicin wax jawaab ah Google Analytics. Jack Miller, 10 Semt Maareeyaha Guusha Macaamilka, wuxuu sharxayaa in qiimaha bounce uu ka caawiyo milkiilayaasha bogga inay qiimeeyaan tayada bogga ama dhagaystayaashooda. Tayada dhagaystayaasha waxaa loola jeedaa in goobta ay ku habboon tahay ujeeddadeedu
Xisaabinta Sicirka Miisaanka ee Google Analytics
Google wuxuu xisaabiyaa qiimaha boogta ah adigoo u qaybinaya hal bog oo dhammaan qaybaha la heli karo.
Heerka sare u qaadista bogga ama bogga wuxuu yeelan karaa mid ka mid ah saddexda saameynood:
Tayada boggaas gaarka ahi waa qarsoodi
Dhegaystayaasha la beegsan waa qalad u ah mawduuca ku qoran goobta.
Macluumaadka ku yaala boggaas ayaa ahaa mid ku filan.
Heerka Xaddiga iyo SEO
Waxaa jiray dood badan oo ah in makiinadaha raadiyuhu ay isticmaalaan heerarka xajmiga oo ah darajo sare. Way adag tahay in la qiyaaso Google macluumaadka xogta Google Analytics si ay u isticmaasho marka bogagga shabakadda. Sababta xariiqdani waxay tahay in haddii milkiiluhu aanu si sax ah u hirgelin GA, markaa xogtu waa mid aan la isku hallayn karin. Si kastaba ha noqotee, way fududahay in la isku qiimeeyo heerka bouncer. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in dadku ay ka soo galaan goobta mashiinka raadinta . Nooca noocaas ah wuxuu noqon karaa isir-qiimeyn, laakiin ma aha sida aynu ku aragno GA.
Tarjumaadda Sicirada Badka
Haddii bogga loogu talagalay in lagu marti geliyo dadka soo booqda, ka dibna kor u kaca qiimaha buuqu waa u xun ganacsiga. Xulashada bogga lafteeda waa mid ka mid ah siyaabaha loo saxayo qaladkan. Waxaa jira sababo kale oo ah heerarka sare u kacsan, iyo dusha sare waa xayeysiin mucjiso leh. Haddii sharaxaaddu aysan u dhigmin mawduuca, dadka soo booqda ayaa iska noqon doona bogga. Haddii mid ka mid ah uu cad yahay waxqabadka goobta, ka dibna xaddiga hooseeya ee soo-jiidashada ayaa muujinaya tayada dhagaystayaasha.
Heerka Xaddiga iyo Is-beddelka
Heerarka sare u qaadidda cabbiraadda guusha, iyo kor u kaca waa inuu ka caawiyo mulkiilaha inuu bedelo naqshad si uu u horumariyo isbedelka. Sidoo kale, ilaha taraafikada ayaa ka caawin kara go'aaminta sababta ay dad badani u boodayaan. Wargeysyada, bogga u gudbinta, iyo AdWords dhamaantood waxay ku biiri karaan heerarka sare. Haysashada indha-ilaalinta kuwan ayaa kaa caawin karta yareynta dhibaatada iyo kor u qaadista heerka qiime-celinta.
Si taxadar leh markaad sawireyso gabagabo
Qiyaasta aan caadiga ahayn ee soo noqnoqoshadu waa mid wax badan u soo diraya GA-ga oo micnaheedu yahay in uu leeyahay dhaqan-xumo. Waxay noqon karaan fiidiyo ama fiidiyowyo fiidiyoow ah oo uu fuliyo milkiilaha. Lahaanshaha qiimaha hooseeya ee dhacdooyinka leh dhacdooyinka korjoogteynta xisaabinta kaydka ayaa ah wax fiican
hoos u dhaca sicirka xaraashka
Habka kaliya ee lagu sameeyn karo tan ayaa ah in la ogaado tayada waxqabadka ee bogagga soo socda. Heerarka aadka u badan ee soo noqnoqda ee ilaha shakhsiyaadka waa inuu hoggaamiyaa mulkiilaha si uu u kormeero una qiimeeyo waxa laga filayo soo-booqdaha. Haddii ay filan yahiin wax fiican, laakiin wali waxaad la kulantaa heerka sare ee xayiraadda, ka dibna bogga dhamaystiran ee dhajinta ayaa ku dhow.
Heerarka ka baxsan
Dadka qaarkood waxay qalad ku sameeyaan sicirka xaraashka iyo qiimaha bixitaanka. Qiimaha baxa wuxuu tixraacayaa casharka ugu dambeeya ee isticmaalaha iyo sababta ay uga joojisay boggaas
Heerarka xaddiga waa in ay gacan ka geystaan ​​sidii loo ogaan lahaa haddii goobta ay ku nool yihiin waxyaabaha laga filayo dadka dhageystayaasha ah. Sidoo kale, waa inay ka caawiyaan sameynta jawi soo jiidasho leh oo loogu talagalay dadka isticmaala Source .